June 10, 2020 – ျမန္မာသတင္းစံု
ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးအတွက် အလှူငွေများလှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ဂျွန်လွင်
ဂျွန်လွင်ကိုတော့ အနုပညာလောကရဲ့ငွေကြယ်ပွင့်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့ Stars & Models Agency ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့သိကြမှာပါ။ ဂျွန်လွင်ကတော့ အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကို မွေးထုတ်ပေးတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်လေးစားခံရသလို လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ မကြာခဏဆိုသလို ရက်ရက်ရောရောလှူတန်းတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်းဆိုရင်လည်း ဂျွန်လွင်က ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာရှင်တစ်ဦးအတွက် လှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လွင်ကတော့ မရွှေကြာ ShweKyar (ရွှေကြာ လူမှုကူညီရေး) မှာ တနှစ်ကျော်အထိ ကင်ဆာရောဂါအတွက် လည်ပင်းမှ အကြိတ်ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့သော မဝေဝေဟာ အခုဆို ဆေးရုံမှ ဆင်းပြီး ဆေးများဆက်လက်သွင်းလျက်ရှိတာကြောင့် လူနာရှင်အသုံးစရိတ်နှင့် ကျန်ရှိအလှူငွေ ရှင်းတမ်းကို လူနာရှင်အတွက် ဆက်လက်ကူညီလှူဒါန်းရန် စီစဉ်ထားရှိဆိုတဲ့အကြောင်း Read more
စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအလွှာအားလုံးကိုလှူဒါန်းရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့ သိန်း(၅၀)လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များ
လတ်တလောကမ္ဘာအနှံဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကာကွယ်ကုသရေးနဲ့တားစီးရေးလုပ်ငန်းတွေကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အတူ ပြည်သူတွေအားလုံးက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ကပ်ရောကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေကိုရပ်နားထားရပြီး ယခုလိုရပ်နားထားတဲ့အချိန်မှာ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံအလွှာအားလုံးလှူဒါန်းရန်အတွက် နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ရန်အောင်၊ခန့်စည်သူ၊ခိုင်သင်းကြည်၊အောင်ရေချမ်း၊ဖြူဖြူထွေးနှင့် ကိုဘိုစန်းတို့က အလှူခံမှူတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သို့ သိန်း(၅၀)ကျပ်ကို လှူဒါန်းသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ အဆိုပါအလှူအကြောင်းလေးကိုတော့”Covid ကာလအတွင်း အခက်အခဲဖြစ်နေသောရုပ်ရှင်လောကသားများအား ကူညီထောက်ပံ့နိုင်ရန်အတွက် သရုပ်ဆောင် ရန်အောင်၊ခန့်စည်သူ၊ခိုင်သင်းကြည်၊အောင်ရေချမ်း၊ဖြူဖြူထွေးနှင့် ကိုဘိုစန်းတို့က မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး သို့ သိန်း(၅၀)ကျပ်ကို လှူဒါန်းသွားခဲ့ပါသည်။ အလှူရှင်များအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်”ဆိုပြီး Myanmar Motion Read more
သူမရဲ့(၅) ခွေမြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေကို ကိုယ်တိုင်တစ်ယောက်ထဲရေးမည့်အကြောင်းပြောလာတဲ့ ပိုပို
ပိုပိုကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော်အဆိုတော်တွေထဲကတစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကတော့ လူငယ်တွေရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာရေပန်းစားနေရာယူထားပြီး တေးစီးရီးအယ်ဘမ်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ထွက်ရှိအောင်မြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုဟာ အနုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး မကြာသေးခင်က HOLIDAY ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကိုထွက်ရှိအောင်မြင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသီချင်းလေးကလည်း ပရိသတ်တွေအကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း” ဖြေ” ဆိုတဲ့သီချင်းMV လေးကိုရိုက်ကူးနေပြီး ဒီသီချင်းလေးမှာတော့ ပိုပိုနဲ့အတူ ပရိသတ်အချစ်တော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေဆန်းက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပိုကတော့ သူမရဲ့သီချင်းတော်တော်များများကို ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်သီဆိုလေ့ရှိပြီး နောက်ထပ်ထွက်မယ့် သူမရဲ့(၅) ခွေမြောက် တစ်ကိုယ်တော်အခွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်တစ်ယောက်ထဲရေးမှာဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ ပိုပိုက “ပိုပို့ရဲ့ ၅ ခွေမြောက် တစ်ကိုယ်တော် အခွေကို Read more
သူမရဲ့မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် smiley လေးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးဂိမ်းကစားပြီး အနိုင်ရရှိသူတွေကို (၃၆)သိန်းဖိုးတိတိချီးမြင့်သွားမည့် စမိုင်းလ်
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်စမိုင်းလ်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီး သိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။သူမကတော့ ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်လို့တောင် ထင်ရက်ရာမရှိအောင်နုပျိုပြီး လှပနေတာဖြစ်သလို မကြာခင်မှာလည်း သူမက အသက်၃၆နှစ်ပြည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ကတော့ မကြာခင်မှာကျရောက်တော့မယ့်သူမရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ် သူမချစ်တဲ့ smileyလေးတွေအတွက်ပျော်စရာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကို ပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်လေးကတော့ smileyလေးတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးဂိမ်းကစားပြီး အနိုင်ရရှိသူတွေကို ပထမဆု ၁၀သိန်း ဒုတိယဆု ၅သိန်းအပါအဝင်ကျန်ဆုပေါင်း များစွာနဲ့ ၃၆သိန်းဖိုးတိတိချီးမြင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် ။ဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ စမိုင်းလ်က”ကျမချစ်ရတဲ့ Smiley တွေကိုဘယ်လိုပျော်အောင်လုပ်ပေးရမလဲ ဘယ်လိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမလဲအမြဲစဉ်းစားနေတတ်တဲ့ကျမ အခုမွေးနေ့လည်းနီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲစဉ်းစားနေတာ. အခုလို Covid အချိန်မှာလူတွေအဓိကလိုအပ်နေတာ ပိုက်ဆံပဲဆိုတော့ Smile ရဲ့မွေးနေ့မှာ ပျော်ပျော်ပါးပါးဂိမ်းတွေလည်း Read more
အိမ်ထောင်တခုကို ဘယ်လိုသည်းခံထိန်းသိမ်းရမလဲသိတဲ့မေကြီးရဲ့ အသက်(၅၅)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ အေးမြတ်သူ
ပရိသတ်အချစ်တော် တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့မိခင်ကတော့ ဒီနေ့မှာပဲ အသက်၅၅နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ဖြစ်သူကလည်း အသက်၅၅နှစ်လို့တောင်ထင်ရက်စရာမရှိအောင် နုပျိုပြီးလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးမြတ်သူကတော့ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်သူမရဲ့လူမူကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ယခုလိုပဲမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားခဲ့ပါတယ် ။ အေးမြတ်သူကတော့ “မွေးနေ့မှစပြီးနေ့ရက်တိုင်းကို… ဒီနေ့လိုလှလှလေးနဲ့ပြုံးပြုံးအသက်ရှည်ကျန်းမာအောင် နေပေးပါနော်…..မေကြီး ဒီထပ်ပိုကောင်းတဲ့နေထိုင်မှုမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါ့မယ်…. အလှချင်းအမြဲပြိုင်ပြီးငြင်းခုန်နေချင်ပါတယ်.ဆံပင်အရှည်လေးထားပေးပြီးအရောင်ဆိုးတာလဲလျော့ပေးပါ နုတ်ခမ်းနီတောက်တောက်တွေကတော့ မေကြီးအမြဲဆိုးပါ.. သမီးကို မဆိုးခိုင်းပါနဲ့ နော်…ရုန်းကန်းခက်ခဲမှုတွေကို မိသားစုအတွက်ဖြတ်ကျော်ပေးခဲ့လို့.. အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်သတ္တိဆိုတာ မေကြီး ဆီကရခဲ့တာပါ….အပြုံးတွေကလည်း မေကြီးဆီက ရခဲ့တဲ့အတွက်အရမ်းကို အဖိုးတန်ခဲ့ပါတယ်. ရန်တွေဖြစ်ရင်း… စိတ်တွေဆိုးရင်း…. အသက်ရှည်ကျန်းမာပါစေနော်…အသက်၅၅…မေကြီးကို အရမ်းအားကျတယ်အိမ်ထောင်တခုကို ဘယ်လိုသည်းခံထိန်းသိမ်းရမလည်း သိတဲ့မေကြီး….. ကို အားကျတယ်….အသက်၅၅မှာရမြေးချီရင်းလှနေတဲ့ မေကြီး ကိုမနာလိုဘူး… Read more
Kညီနဲ့အတူ အိန္ဒိယသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ချစ်စရာအိုက်တင်လေးတွေနဲ့ အတွဲညီညီကထားတဲ့ ချောရတနာရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးလေး ချောရတနာကတော့ အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်ပြီး သရုပ်ဆောင်ထူးချွန်တဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီဆုကိုလည်းထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ချောရတနာကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေ အနည်းငယ်သာ လုပ်တော့ပေမယ့် အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကတော့ အခိုင်အမာရှိနေဆဲပါပဲနော်။ ချောရတနာကတော့ ဂရုတစိုက်နဲ့ ချစ်ပေးတတ်တဲ့ခင်ပွန်းအပြင် ချစ်ရာကောင်းတဲ့ သားလေးတစ်ယောက်နဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်ကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ထည်ဆောက်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်အမေလို့တောင်ထင်ရက်စရာမရှိအောင် နုပျိုလွန်းတဲ့ ချောရတနာကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ tik tok ဗီဒီယိုလေးတွေကိုရိုက်ကူးပြီး သူမရဲ့လူမူကွန်ရက်ကနေ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ချောရတနာက ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kညီနဲ့ အတူနာမည်ကြီး Read more
မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ထောပတ်ထမင်း အလှူဒါနပြုခဲ့တဲ့ ရွှေသမီး
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ရွှေသမီးကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုလဲ မမှားပါဘူးနော်။ ရွှေသမီးကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေတတ်ပြီး ဖော်ဖော်ရွေရွေဆက်ဆံတတ်တာကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုနေရသူလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။မိဘအပေါ်မှာသိတတ်လိမ္မာတဲ့ သမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေသမီးကတော့ အလှူအတန်းနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း မကြာခဏဆိုသလို သူတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီး လှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်နေသူလေးပါ။ မနေ့က ဇွန်လ(၉ )ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်း ရွှေသမီးက သူ့ရဲ့မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်တရအဖြစ် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှ နာယကကြီးနဲ့ အမှုဆောင်အဖွဲ့တို့အား ထောပတ်ထမင်းနဲ့ ရေခဲမုန့်တို့ ကျွေးမွေးကုသိုလ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်း ရွှေသမီးရဲ့ အလှူဒါနလေးအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ပါအုံးနော်..။ Source-Win Myaing Zawgyi ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးမွာ ေထာပတ္ထမင္း Read more
ပရိသတ်ကြီးရေ Rapper အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နိုင်းဝမ်းကတော့ အောင်မြင်မှုများစွာရရှိထားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်းဝမ်းကတော့ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေသီဆိုထားတဲ့အမိုက်စားသီချင်းတွေကြောင့် လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့သူဆိုလဲ မမှားပါဘူးနော်။ ဒါ့အပြင် နိုင်းဝမ်းကတော့ မတူညီတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ ပရိသတ်ရဲ့အကြိုက်နဲ့ထပ်တူကျမယ့်သီချင်းတွေကို ကြိုးစားဖန်တီးနေသူတစ်ဦးလဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်းဝမ်းကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။အခုဆိုရင်တော့ နိုင်းဝမ်းက မကြာသေးခင်က လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အိမ်ထောင်ပြုသွားပြီဖြစ်တဲ့ အိမ်ချစ်တို့ဇနီးမောင်နှံအတွက် ဂုဏ်ပြုစကားဆိုရင်းချစ်သူကောင်မလေးကိုလည်း လက်မှတ်ထိုးဖို့ ခွင့်တောင်းထားပါတယ်။ နိုင်းဝမ်းကတော့ “ ပြောတော့ဖြစ် “ကိုကြီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကြရင် ညီမလေးကို ပန်းပေးကြဲမှာလား၊ အရံပေးလုပ်မှာလား”တဲ့အခုကြတော့သူကယောက်ျားအရင်ယူသွားတဲ့ညီမအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့တွေ့သွားပြီး ကိုကြီးတို့အတွက်ပါ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ညီလေးအသစ်တစ်ယောက်ထပ်ရလိုက်လို့လဲ အရမ်းဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ချစ်ညီမရေကဲ သဲသဲလေးရေကိုယ်တို့လဲ ကိုဗစ်မပြီးခင် လက်မှတ်လေးအရင်ထိုးထားကြရအောင်လား Read more
သမိုင်းရာဇဝင်ဗိဿနိုးကျိန်စာ ပျက်ပြယ်ပြီဟု သူ့အနေနဲ့ ယူဆမိတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူ
သမိုင်းရာဇဝင်ဗိဿနိုးကျိန်စာ ပျက်ပြယ်ပြီဟု သူ့အနေနဲ့ ယူဆမိတဲ့အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်မင်းသားကြီးဦးကျော်သူကတော့တစ်ခေတ်တစ်ခါကအနုပညာ လောကမှာအောင်မြင်မှုတွေကိုရယူသိမ်း ပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာ သာတရားအထူးကိုင်းရှိုင်းပြီး နာမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အား ကြိုးမာန်တက်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဦးကျော်သူကသူ့အနေနဲ့ဗိဿနိုးကျိန်စာပျက်ပြယ်ပြီလို့ယူဆမိတဲ့အ ကြောင်းကိုအခုလိုပဲရှင်းလင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ဦးကျော်သူ ပြောခဲ့တာကတော့ ” ဗိဿနိုးကျိန်စာပျက်ပြယ်ပြီလား။ပြည်မြို့ တစ် ဖက်ကမ်းပန်းတောင်းမြို့နယ်ရှိ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်ခြေတော်ချခဲ့သည့် “ဖိုးဦးတောင်ဘုရား”သမိုင်းတွင် ပွေးဖိုနှင့်ပွေးမ တို့သည် မြတ်စွာဘုရားအားအကယ်၍ဖူးတွေ့ရပါကတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအမြန်လာခေါ်၍မောင်မယ်စုံညီမြတ်စွာဘုရားအားအတူတကွဖူးမျှော်ကြမည်ဟုဂတိသစ္စာ ပြု ခဲ့သော်လည်း ပွေးဖိုမှာ တောတွင်းအစာရှာရင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြွမြန်းလာသည်ကိုအမှတ်မထင်ဖူးတွေ့ခဲ့သော်လည်း မိမိ၏လက်တွဲဖေါ် ပွေးမအားပြန်ခေါ်ပါကမြတ်စွာဘုရားအားလွတ်သွားမည်စိုး၍မိမိတစ်ဦးထဲသာ မြတ်စွာဘုရားအားဖူးမျှော်ကန်တော့ဦးချခဲ့တော့သည်။ ဤအကြောင်းအားအိမ်ပြန်ရောက်၍ပွေးမမှသိရှိသောအခါဂတိသစ္စာမတည်သော လင်ဟုစွပ်စွဲကာပေါက်ကွဲ၍နောင်သံ သရာအဆက်ဆက်ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် ရန်သူဘဝအဖြစ်သာတွေ့ဆုံရပါစေသားဟု ကျိန်စာတိုက်ဆိုခဲ့တော့သည်။ယင်းသမိုင်းရာဇဝင်ကျိန်စာဆိုးသည် ဒွတ္တဘောင်မင်းနှင့်ဗိဿနိုးဘုရင်မတို့၏ ရန်သူသဖွယ်အခဲမကြေသောအဖြစ်သို့ရိုက်ခတ်လာတော့သည်။ Read more
(၁၃)ကြိမ်မြောက်မှာ အောင်ဘာလေသိန်းထီဆုကြီးပေါက်ခဲ့လို့ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်းကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားပေါင်းများစွာရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ သဲသဲလှုက်အားပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ သရုပ်ဆောင်တင်သာမက အဆိုပိုင်းမှာပါ အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့သူတစ်ဦးလို့ ဆိုရမှာပါ။ နန်းမြတ်ကတော့ နှစ်တွေအကြာကြီး လက်တွဲခဲ့တဲ့ချစ်သူနဲ့ လက်ထက်ခဲ့ကာ ချစ်စရာကောင်းလေး သားလေးတစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်ထားနိုင်သူပါ။ဒါ့အပြင် နန်းမြတ်က ကလေးတစ်ယောက်မွေးဖွားထားတဲ့မေမေလို့ မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုလှပနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားကျနေရသူပါ။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ နန်းမြတ်က (၁၃)ကြိမ်မြောက်မှာ အောင်ဘာလေသိန်းထီဆုကြီးပေါက်ခဲ့လို့ပျော်ရွှင်နေတဲ့အကြောင်းလေးကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေ မျှဝေလာခဲ့ပါတယ်။ “၁၃ကြိမ်မြောက်မှာထီပေါက်နေတာ မနေ့ကမှတိုက်မိတယ်ပျော်လိုက်တာ ဟီးဟီး”ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအတွက် အောင်ဘာလေထီဆု(၁)သိန်းဆုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့လို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ နန်းမြတ်အကြောင်းလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ Source-Nann Myat Phyo Read more